Resaka Am-Pinday Mampihena Ny Fisamatsamahana Eo Amin’ny Indiana sy ny Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2014 2:19 GMT
Pikantsary avy amin'ny AIB Video
Nandritra ny taona maro, nahita ezaka maromaro hanakanana ny lonilony naharitra ela teo amin'ireo firenena roa tonta i India sy Pakistana. Tamin'ny andron'ny Fahaleovantenan'i India tamin'ny 15 Aogositra 2014), nanome endrika hafa momba izany ny tarika mpanao hatsikana Indiana All India Bakchod (AIB) tamin'ny famoahana lahatsary mampiseho ireo Indiana olo-tsotra miresaka am-pinday amin'ny olon-tsy fantatra ao Pakistana.
Amin'ity lahatsary ity, mifampiresaka amin'ny finday ireo olona tsy mifankafantatra India sy Pakistana. Miresaka momba ny fahitan'ny andaniny sy ny ankilany momba ny Indiana sy ny Pakistaney azy ireo izy ireo, miresaka ny fiainana manokana sy ny fialam-bolin'izy ireo, mijery izay marimaritra iraisana eo amin'izy ireo ary mifampiarahaba amin'ny Andron'ny Fahaleovantenan'ny firenena roa tonta.
Efa tamin'ny taona 1947 no nisian'ny rà mandriaka teo amin'i India sy Pakistana, raha nozarain'ny Britanika ho anatin'ny Dominiônan'i Pakistana (lasa Repoblika Islamikan'i Pakistana sy Repoblikam-bahoakan'i Bangladesh taty aoriana) sy ho Firaisamben'i India (izay lasa Repoblikan'i India taty aoriana) i India indrindra noho ny resaka fivavahana, mba hanakanana ny disadisa tsy mitsaha-mitombo eo amin'ireo fiarahamonina Hindou sy ny Miozolomana. Nandravarava ny firenena roa tonta ny fizarazarana, mbola marefo ny fifandraisan'izy ireo amin'izao fotoana izao, simban'ny ady, ny disadisa momba ny sisintany, ny tsy fahombiazan'ny miaramila ary ny ady mitohy amin'i Kashmir.
Raha mbola manontany ny antony maha-zava-dehibe ny ezaka tahaka izany mba hampihenana ny lonilony eo amin'ireo olom-pirenena ao amin'ny firenena roa tonta ianao, dia topazo maso fotsiny ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny Youtube ao amin'ity lahatsary eo ambony ity.
Bilaogera Indiana Farzana Versey nanome fandanjalanjan-kevitra amin'ny lahatsary:
Hampihavana kokoa ireo olona avy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ve izany (mbola tsy miresaka firenena roa tonta isika)? Zava-iainana «voafehy» izany, ary na dia tsy voasivana aza ireo fanehoan-kevitra, dia fantatra fa tokony hazava tsara ny resaka. Zavamisy iray no hitantsika – mpivarotra kafe na fivarotana eny amin'ny fivilian-dalana iray. Na ny tanora any amin'ny tobim-pianarana ambony aza mba mahafantatra tsara ara-politika ary manana fisainana feno ftsarana an-tendrony momba ny ankilany ny ankamaroan'izy ireo. Tsy manafoana ny fahalalàna tsara momba ny Bollywood, cricket, na sakafo izany. Na izany aza, mety ho azo avadika politika izany rehetra izany amin'ny andro hisian'ny fifaninanana horonantsari-mihetsika, lalao fanatanjahatena na lalao fandrahoana sakafo.
Nanome ny fijeriny ihany koa izy:
Tiavo izany … aza raisina ho ny marina rehetra izany.